FDA waxay kordhineysaa xakameynta alaabada CBD • Dawooyinka Inc.eu
Maaddaama suuqa wax soo saarka hemp ku saleysan uu kacayo, maalgashadayaal badan ayaa la tacaalaya aagga cawliga ah ee alaabada hemp lagu ganacsado Ameerika. Gaar ahaan baahida sii kordheysa ee cannabidiol (CBD) waxay dhalisey inay bataan badeecooyin badan oo kaladuwan oo la heli karo iyadoon warqad dhakhtar laga iibinin tafaariiqleyaal badan.
Shirkado badan ayaa doonaya inay galaan suuqa koraya, laakiin qaab dhismeedka sharciyeed ayaanay u kala cadayn soo saarayaasha iyo macaamiisha badani. Daneeyayaasha warshadaha, sharci dejiyeyaasha gobolka iyo federaalka, iyo maxkamadaha Mareykanka ayaa sidaas darteed cadaadis saaraya Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). Hay'adani waxay kormeertaa oo ay nidaamisaa nidaamka oggolaanshaha ee suuq-geynta iyo iibinta CBDalaabada lagu daro cuntada, daawooyinka ama waxyaabaha la isku qurxiyo.
1 Shuruucda iyo xeerarka loogu talagalay CBD
2 Xakamaynta adag ee alaabada CBD
3 Tilmaamaha la taaban karo ee shirkadaha CBD
Shuruucda iyo xeerarka loogu talagalay CBD
Horumarinta nidaaminta waa hawl gaabis ah. Iibinta tafaariiqda ee alaabada CBD ayaa cirka isku shareertay tan iyo markii la ansixiyay Sharciga Horumarinta Beeraha ee 2018 (oo loo yaqaan 'Bill Farm 2018'). Sharciga Beerta ayaa ka saaray hemp-ka Sharciga Waxyaabaha La Xakameeyay, isagoo wadada u xaaraya wax soo saar sharci ah, ganacsi, iyo adeegsiga badeecooyin lagu sameeyay hemp iyo waxyaabaha ka dhasha. Marka laga reebo noocyada ka kooban in ka badan 0,3% delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).
Sharciga Beeraha ee 2018 ayaa sidoo kale caddeeyay awoodda FDA ee ah inay nidaamiso CBD iyada oo ah walax ka mid ah baaxadda Xeerka FD & C markii lagu daro cuntooyinka, daroogooyinka ama waxyaabaha la isku qurxiyo.
Ilaa maanta, FDA waxay ogolaatay kaliya hal wax soo saarka daawada CBD (Epidiolex). Daawada waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xaaladaha suuxdinta ee dhifka ah. Si kastaba ha noqotee, ma aqbalin CBD inay ka kooban tahay ama lagu daro "guud ahaan loo aqoonsan yahay inay ammaan tahay" marka loo eego Sharciga FD & C ee ku jira nafaqada iyo waxyaabaha kale ee nafaqada leh. Iyada oo horumarin ku saabsan hemp iyo sharciyada xashiishka ee iftiinka qaran ahaan, FDA waxay bilowday inay fiiro gaar ah u yeelato xakamaynta alaabada CBD.
Xakamaynta adag ee alaabada CBD
Laga soo bilaabo 2015, FDA waxay soo saartay in ka badan 50 waraaqo digniin ah oo lagu bartilmaameedsanayo shirkadaha CBD suuq geyn aan la aqbali karin iyo calaamadeyn. Aragtida ayaa ah in shirkadaha aysan waligood sheegan in wax soo saarkooda CBD ay leeyihiin codsiyo caafimaad ama faa'iidooyin daaweyn. Tusaalaha tani waa xayeysiinta alaabada CBD ee daaweynta xaaladaha sida arthritis, kansarka iyo xitaa COVID-19.
FDA waxay sidoo kale diidaysaa sumadaha CBD oo leh sheegashooyin faa'iido caafimaad ama daaweyn marka aysan jirin tilmaamo dhammaystiran ama sax ah macaamilka sida loogu isticmaalo sheyga CBD si badbaado leh. FDA waxay kaloo xustay in qaar ka mid ah waxsoosaarka CBD loo suuq geeyo sidii cunno caafimaad iyo nafaqo dheeraad ah oo leh adeegsi caafimaad ama faa'iidooyin daaweyn. Tani sidoo kale waa wax aan la aqbali karin. Markay suuq-geynta ama sumaddu ka kooban tahay sheegasho caafimaad ama caafimaad, waxay u horseedi kartaa baaritaan buuxa.
Tirada waraaqaha digniinta gaarka ah ee CBD ee la diray sanadaha 2019 iyo 2020 waxay muujiyeen koror muuqda oo ku saabsan baaritaanka FDA ee alaabada CBD. Bishii Diseembar 22, 2020, FDA waxay ku dhawaaqday in wareeggeedii ugu dambeeyay ee waraaqaha digniinta ah loo diray shirkadaha suuq geeya alaabada sanka (tusaale, buufinta sanka), alaabta neefta (tusaale, uumiga uumiga), iyo alaabada indhaha (sida, dhibcaha indhaha) oo ay ku jiraan CBD oo leh sheegashooyin caafimaad . FDA waxay sheegtey in alaabooyinkan ay yihiin kuwo walaac gaar ah leh dariiqa maamulka oo khatar weyn ku ah caafimaadka bulshada.
Tilmaamaha la taaban karo ee shirkadaha CBD
In kasta oo ay dadaalkeeda fulinayso, haddana FDA waxay sii wadaysaa inay xoogga saarto taageeradeeda ku aaddan horumarinta wax soo saarka CBD. Bishii Diseembar 17, 2020, Guddiga Ganacsiga ee Federaalka (FTC) wuxuu ku dhawaaqay inuu bilaabay Howlgalka CBDeceit: weerarkii ugu horreeyay ee ka dhanka ah shirkadaha CBD ee suuqgeynta alaabada CBD si been abuur ah u sheeganaya inay daaweynayaan xaalado caafimaad oo daran sida kansarka. in kasta oo aan si cilmiyaysan loo taageerin. Ka soo horjeedda waraaqaha digniinta ee ka socda FDA, FTC waxay bixisay ganaaxyo. Shan ka mid ah lixda shirkadood ee la ganaaxay ee CBD waa inay bixiyaan ganaaxyo u dhexeeya $ 20.000 illaa $ 85.000. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa soo saarayaasha CBD iyo dhinacyada iibka inay la macaamilaan suuqgeynta iyo calaamadeynta taxaddar.
Intaa waxaa dheer, shirkadaha CBD waa inay si taxaddar leh ula socdaan horumarka sharciyeynta oo ay si joogto ah dib ugu eegaan sida horumarada noocaas ah ay ula jaan qaadayaan howlahooda ganacsi.
Akhri wax dheeraad ah jdsupra.com (Source, EN)
Waxaa la rajeynayaa in warshadaha xashiishka ee sii kordhaya ay gacan ka geysan doonaan in dhaqaalaha jasiiradaha Caribbean-ka qaarkood ay ka dhigaan mid ...
10ka ugu sarreeya faa'iidooyinka CBD ee daryeelka maqaarka iyo fayoobaanta
CBD waa meel kasta oo aad eegto maalmahan, laga bilaabo dukaamada waaweyn, dukaamada nasashada ilaa dukaamada waaweyn. Wax aan nafsaani ahayn ...
Ciidaha ayaa geeska ka dhow. Saint Nicholas hadda waa uu ka tagay dalka, waxa uuna ku maqnaa fiidnimo ...